Secrets of quruxda iyo caafimaadka dumar
aad halkan: Home
Ma heli karaa in ay helaan farxad iyo guul? Dadka waxa loo qaybiyaa laba qaybood oo ka mid ah dadka. category ugu horeysay ee ka mid ah kuwa, waa kuwa si joogta ah ugu faraxsan oo ku faraxsan isu, guulaystaan ​​nolosha shakhsiyeed, iyo shaqada. Laakiin category labaad waa kuwa, kuwaas oo dusha category ugu horeysay oo rabtid inaad codsi ka category ugu horeysay. Aqoonsiga, mid kasta oo inaga mid ah ayaa goor, marka aan ku raaxaysan kartaa sharaf iyo sidoo kale-u qalantay, laakiin haddii sababta oo ah Furuujtooda, haddii aynu ugu Raaxaynay this ka cabsi.
More: layliyo isku-kalsoonaanta!
Qof kasta ee daqiiqado of daal had iyo jeer ku riyoonaya inuu nafta, ku saabsan, sida durdurrada light oo biyo dhex ordaya iyada oo jidhka, dhaqashada daal ma aha oo kaliya, laakiin oo dhan dareenka diidmo ah iyo dareenka ah maalintii. iyo, run ahaantii, nafihii ugu fudud waa "bogsiiye" anti-stress, iyo haddii la mid ah loo kordhiyo saamaynta this in noocyo kala duwan oo waqtiga? Markaasaa waxaa soo baxday naftiinna sare, kaasoo kara inuu siiyo niyadda ugu fiican, farxad, iyo bogsiiya jidhka, danbaynti, takhalusi daal.
More: Qubeyso sare
daryeelka jirka xagaaga
jirka Summer waa la hoos geliyey laba imtixaan: shucaaca qoraxda ultraviolet iyo heerkulka sare. Si aad u difaaco shucaaca, aad u baahan tahay in si taxadir leh ka fiirsan doorashada ee habka difaaca, iyo sidoo kale in la yareeyo waqtiga ku bixisay in qorraxda, no more 1,5-2 saacadood maalintii.
In daryeelka jidhka ee xagaaga, dhagaysan, waxay ku weydiineysaa. Haddii maqaarka la bilaabo si ay u koraan dhab ahayn, ka dibna codsan dhirta, haddii maqaarka qalalan yahay, biyo caatada. daryeelka jirka xagaaga waa in ay ahaadaan dhamaystiran oo joogto ah.
More: daryeelka jirka xagaaga
Maqaarka Body Care
maqaarka waa in uu ahaadaa farxin isha, oo waxay yeelan doontaa si adag u shaqeeyaan. Ka dib oo dhan, maqaarka caafimaad aan ku xiran mar walba ku, waxa cadadka lacagta aad bixisay isku qurxiyo, goobaha qurxinta dumarka iyo goobaha kale iyo xitaa aan daryeel ku haboon. Inta badan waxay ku xiran tahay awoodda, hab nololeed, aad wadid. Taasi oo dhan waxaad u baahan tahay in la ogaado iyo, haddii aad rabto in aad si buuxda u galaan caafimaadka maqaarka ay.
More: Maqaarka Body Care
Mid kasta oo inaga mid ah dabeecadda siiyey tiro yar oo quruxdiisa. Qof timaha raaxo qaro weyn helay, iyo kuwa – baarkooda oo dhererkeeda sida, in khad lahayn looma baahna ama ciddiyaha laga bilaabo dhalashada xoog leh oo caafimaad. Laakiin waxaa jira, kii muuqaalkaaga ma jeela, halkan, waxay dhihi, tin, iyo badhidii jiirka. Laakiin taasi ma waxa lagu sameeyaa. Your quruxduna waa dibadda ah, iyo doonista hoose, Waxay ku xiran tahay in aad on.
More: alaabooyinka jidhka
page 1 ka 2
Cosmetics daryeelka jirka ah